Ungawadlulisa kanjani amafayela phakathi kwe-Iphone noma i-Android devices | Izindaba zamagajethi
Ukudlulisa amafayela phakathi kwe-iPhone ne-Android kulula kakhulu nge-SnapDrop
UPaco L Gutierrez | | Android, Apple, Izifundiswa
Uma wazi i-Iphone uzokwazi ne-AirDrop, uhlelo lwendabuko lokwabelana ngazo zonke izinhlobo zamafayela phakathi kwamadivayisi we-apula ngaphandle kwentamboYize le ndlela ingasebenzi uma lokho esikufunayo kungokwabelana ngamafayela neWindows PC yethu, ithebhulethi noma i-Android Smartphone, kufanele siye kwezinye izindlela ezinjenge-imeyili noma ulayishe okuqukethwe efwini bese ukulanda kwenye ingxenyekazi yethu.
Kukhona enye indlela ngaphandle kwemingcele ebizwa I-Snapdrop futhi iyahambisana nanoma iyiphi idivayisi enesiphequluli se-inthanethi esakhelwe ngaphakathi noxhumano lwe-Wi-Fi, lapha sichaza ukuthi singakwenza kanjani igxathu negxathu.
Kunezindlela nezindlela ezahlukahlukene zokulayisha noma zokwabelana ngamafayela ku-inthanethi, phakathi kwezinye zazo izinsizakalo zefu ezifana ne-Microsoft's Onedrive, i-Google's Drayivu, iDropbox noma eyama-Amazon uma uyilungu eliyinhloko lepulatifomu noma izindlela ezifana neTelegram noma i-WhatsApp . Uma une-iPhone, izinto zilula kakhulu nge-AirDrop, ubuchwepheshe bokuphathelene obuvela ku-Apple bokudlulisa amafayela ngaphandle kwentambo phakathi kwamadivayisi we-Apple. Umqondo ukuthumela amafayela usebenzisa ukuxhumana okungenantambo okufanayo, ukuze la mafayili angadluli kwi-Intanethi kepha iya kusuka kudivayisi iye kudivayisi nge-router.
I-AirDrop isibe ngesinye sezicelo ezithandwa kakhulu phakathi kwabasebenzisi be-apula. Uma ushintshele ku-Android noma ufuna enye indlela Ku-Android ethulile, kukhona ukulingisa okwenzelwe ukwenza impilo ibe lula kithina kungakhathalekile ipulatifomu noma ithuluzi esinalo, futhi ngaleyo ndlela sikwazi dlulisa amafayela ethu ebangeni elifushane kalula. Kuzo I-Snapdrop insiza yamahhala eku-inthanethi engadingi ukufakwa.
1 Kulula, kumahhala futhi ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokubhalisa
1.1 Idatha yemininingwane ye-Snapdrop
1.2 Ukudluliswa Kwefayela
Kulula, kumahhala futhi ngaphandle kwanoma yiluphi uhlobo lokubhalisa
Idatha yemininingwane ye-Snapdrop
Kukhuthazwe yi-Apple Airdrop I-Snapdrop isebenzisa ubuchwepheshe obuningi obujwayelekile ukufeza le njongo: HTML5, ES6, CSS3, WebRTC, Web Sockets, and NodeJS (I-HTML ne-CSS ubuchwepheshe obusekelwe amakhasi ewebhu wamanje). Le sevisi isebenza ngqo kusuka kusiphequluli sethu se-inthanethi, iyahambisana nanoma yisiphi isiphequluli sesimanje, kokubili kudeskithophu (iWindows, i-Mac, i-Linux) namadivayisi weselula (i-Android, i-iOS).
Ngokuzenzakalelayo isebenzisa I-WebRTC ngokwabelana ngamafayela, futhi esimweni seziphequluli ezingasekelwa njengeSafari noma i-Internet Explorer, sebenzisa Izikhoxe zewebhu.
Ukusebenza kwe I-Snapdrop Kulula kakhulu, sivula isiphequluli sewebhu kumadivayisi amabili esizowasebenzisa, ozothumela nomunye ozomthola, ukusebenza kuyefana kuzindlela zombili.
Womabili amadivayisi kufanele axhumeke kuxhumo olufanayo lwe-Wi-FiNgakho-ke sizobona kusiphequluli ngasinye enye idivayisi enegama lohlelo lokusebenza nesiphequluli. Sizodinga kuphela khetha leyo divayisi bese ukhetha ukuthi yiliphi ifayela ozolithumela: amadokhumenti, amavidiyo, imisindo, izithombe ... Okufunayo nosayizi owufunayo.
Ngaphezu kokuthumela nokwamukela amafayela, I-Snapdrop futhi yenza kube lula ukuthumela nokwamukela imilayezo. Akuwona umsebenzi osebenzayo ukubheka ukuthi le sevisi izama ukwabelana namadivayisi aseduze. Kepha inketho ikhona, kufanele sicindezele futhi sibambe enye idivayisi futhi izosivumela ukuthi sithumele umyalezo omfushane.
Ijubane lokudlulisa lizoya ngokusondela kwedivayisi nge-router kanye ne-bandwidth lapho ixhunywe khona, i-Snapdrop imahhala, akukho ukubhaliswa okudingekayo, ayigcini amafayela kunoma iyiphi iseva, uhlelo lokusebenza lubethelwe futhi akukho mkhawulo wamandla noma usayizi wamafayela abiwe. Ngokubona kwami ​​uhlelo oluzinzile futhi olufinyelelekayo, nangaphezu kwezicelo eziningi ezinikezelwe kulokho kusetshenziswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ukudlulisa amafayela phakathi kwe-iPhone ne-Android kulula kakhulu nge-SnapDrop
Izinhlelo zokusebenza ezingcono kakhulu zamahhala zeWindows
IHuawei ivula isitolo esisha eMadrid, siyakubonisa yona